Bọchị: Machị 28, 2020
Dabere na nkwupụta nke Gọvanọ nke Istanbul Ali Yerlikaya kwuru na twitter, a machibidoro iji ngwa dịka Bla-bla-car na mgbochi tagzi na tagzi na ụgbọ ala ndị ọzọ. Obodo nke gọvanọ Istanbul dị ka ndị a: [More ...]
Gọvanọ nke Istanbul Ali Yerlikaya: A gaghị etinye ụmụaka n'ime ahịa
Dabere na nkwupụta oge ikpeazụ nke Gọvanọ Istanbul Ali Yerlikaya, a gaghị akpọ ụmụaka ụmụaka Istanbul na ahịa na ebe ahịa. "Iji gbochie ụmụ amaala anyị isoro ụmụ ha na-anọ n'ahịa na ebe a na-ere ahịa, [More ...]
Dika onu ogugu ekwuputara site na weebụsaịtị nke Ministry of Health, akuko Coronavirus bu nke 28.03.2020 bu nke a: Na ngụkọta, e mere nnwale 55.464 ma chọpụta ọnọdụ ikpe 7.402. Enwere ọnwụ 108 na mmadụ 445 nọ na nlekọta anya. [More ...]
ANATOLIS DIAGNOSIS NA BIOTECHNOLOGY: companylọ ọrụ ahụ, nke na-arụpụta na Tuzla, na-achọpụta nje corona na nyocha nke iku ume mmadụ yana ihe nyocha Bosphore Coronavirus (2019-nCoV) o mepụtara. PCR oge, ngwaahịa nke ụlọ ọrụ nwere ngwa patent anọ [More ...]
Dabere na okirikiri nke oflọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mpụ si kwuo, ndị njem ụgbọ njem ọha nwere ike ibu pasent 50 nke ikike akọwapụtara na akwụkwọ ikike ahụ. Directorate IETT, nke na-enyocha usoro ya na ụgbọ elu ya na-agabigaghị ókè a, Fleet Tracking [More ...]
Onye Minista ofgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu, n'okwu ya n'okwu emume a emere na Ministry, mgbe ngwụcha Septemba jiri ihu ọma nke Onye Isi Ala Recep Tayyip Erdoğan na Minister Mr. Cahit Turhan, [More ...]
A na-awụpụ ụgbọ ala ọha na eze tupu oge ọ bụla na Elazig
Ndi Elazig Municipality na –ebu n ’mmerita-mmamiri na igba ogwu n’otu oge n’ime ugbo ala nke ndi ọha. All n'ụwa n'okpuru mmetụta nke virus ọhụrụ ebe n'elu (Covidien 19) nwere ike hụrụ mgbe akasiaha Elazig na Turkey [More ...]
Kpọọ Staynọgide ightslọ Na Iche Iche na Van
Iji belata mgbasa nke ọrịa coronavirus, Obodo Van Metropolitan akpọọla ụmụ amaala ka ha nọrọ n'ụlọ site na itinye 'nọrọ n'ụlọ' na ọkụ ọkụ na 'Gaa n'ụlọ' na ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ. ahụ ike [More ...]
Ngwaọrụ ọghọm arụnyere na Transportgbọ Ọgbọ Ọhaneze na Kahramanmaraş
Obodo Kahramanmaraş Obodo ukwu bidoro na-ewepụta ọgwụ na-ekesa maka iji ụgbọ njem ọha na-eme ihe. Kahramanmaraş Obodo Ime Obodo megidere ọrịa coronavirus na-emetụta ụwa. [More ...]
Hayde Eve Kpọọ na Sistemụ Nweta fficgba Ahịa na Trabzon
N'ime oke nke usoro coronavirus, Trabzon Obodo ukwu na-akpọ maka 'Nọrọ n'ụlọ "na' Hayde Eve 'na usoro akara ngosi okporo ụzọ. Ndi isi obodo ukwu, imaara ndi amaala ka ha ghara isi n’ụlọ ha wezuga ma ha kwesiri ibuso oria ojoo [More ...]
Transportgbọ njem ọha na-efu n'efu na ndị ọkachamara na-elekọta ahụike na Antalya
Ndị ọrụ ahụike na Antalya ga-erite uru site na ọrụ ụgbọ njem ọha na-akwụghị ụgwọ. Site na nkuzi nke Antalya Metropolitan Municipality Mayor Muhittin Böcek, ndị ọrụ ahụ ike ga-egosi kaadị ndị ọrụ ha ma were ụgbọ ala gọọmentị nke Obodo na usoro ụgbọ okporo ígwè. [More ...]
Ọchịchị ime obodo Mersin na-aga n’ihu na -eme ka ihe niile na - eme ka mmiri ghara ịdị na - alụ ọgụ n'obodo niile megide coronavirus na - agbasa n'ụwa niile. Otu egwuregwu dị na Mersin Intercity Bus Terminal n’ụbọchị ikpeazụ nke njem intercity n’ihi ọrịa coronavirus. [More ...]
Obodo Kayseri mepere emepekwaara njem n'ụgbọ njem ọha maka ọhaneze nke a ga-agbaso oge niile nke ndụ n'ihi iyi egwu nke coronavirus. N'ihi ya, a na-ewebata usoro oche dị iche iche na sistemụ ụgbọ okporo ígwè na bọs. coronavirus [More ...]
Arụrụ ọrụ Metro na 2017 yana iwu okporo ụzọ na 2018 kwụsịrị ibuga ụgbọ njem na şlọ ọgwụ Ba Cityakşehir City. Na nzukọ a na-eme na Istanbul Governorship na 25 Disemba 2019, ekwuputala na okporo ụzọ şlọ Ọgwụ Başakşehir bụ ihe mbụ dị mkpa. na [More ...]
A gaghị anakọta ụgwọ Terminal n'aka ndị ahịa Minibus na İzmir
Mbelata njem njem ọha na eze n'ihi ọrịa Corona ruru ndị ahịa nke obere obere ụlọ ọrụ. Obodo Izmir nke dị na Metropolitan kpebiri ịghara ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụgbọ ala nke minibus ọ bụla na-akwụ maka ọnwa atọ. Mmụta iji buso ọrịa na-efe efe na İzmir [More ...]
Spiked Corona Virus Warning na okporo ụzọ ọkụ na Elbistan
Iji nwekwuo ike ibute ọrịa corona na mpaghara Elbistan nke Kahramanmaraş, a dọrọ ndị mmadụ aka na ntị ka ‘Neeş Görümyon’, ‘laa n’ụlọ’ ma ‘nọ n’ụlọ’ n’obodo ha. Ọrịa Corona [More ...]
Ejiri Lane Social Distụtara maka Buses na Trams na Gaziantep; Gaziulaş, nke jikọrọ ya na Gaziantep Metropolitan Obodo, mepụtara usoro eji agba mbọ iji hụ na anya dị n'ụdị ụgbọ ala na ụgbọ ala. Oche ndị njem, ”Ezigbo ndị njem. Maka ahụ ike gị [More ...]
Egosipụtara Tramya Nostalgic Tram Tender na Coronavirus; E tinyegola ịdị nro maka ụzọ ụgbọ ala a ga-ewu n'etiti ụlọ alakụba Ọhụrụ na Ọhịa Mba dị na Sakarya ruo ụbọchị ọzọ n'ime oke nke usoro coronavirus. Site na Sakarya Nnukwu Obodo [More ...]
Bursa Teleferik A.Ş. Nkwupụta e mere na akaụntụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ekwuputara na nnwale nje corona nke Onye isi oche oflker Cumbul dị mma. Nkwupụta ahụ kwuru, "Mgbe achọpụtara ya, ọrịa a na-achịkwa, [More ...]
Onye Minista Azụmaahịa Ruhsar Pekcan kwuru na ha etinyere “azụmaahịa ndị mba ọzọ na-enweghị mmekọrịta” n'ime oke nke usoro e mere megide ụdị ọrịa ọrịa coronavirus ọhụrụ (Kovid-19) wee kwuo, “Anyị enwetala nnukwu ihe ịga nke ọma nke ga-esetịpụrụ ụwa niile ihe atụ. azụmahịa [More ...]
Konya Metropolitan Municipality, akasiaha coronaviruses ọrụ maka ahụ ike nke ụmụ amaala site nnọọ n'ụbọchị mbụ ọ malitere ike hụrụ na Turkey na-aga n'ihu Iweputa. Obodo Konya mepere emepe, n'ime atụmatụ ndị akpọrọ Disinfection Action, adịla [More ...]
Atụmatụ ịbanye n'ụgbọ njem Konya na Kọmịị Rail, n'ime usoro nke mkpachara anya ndị ọrụ dị mkpa na ndị Governorate buru iji gaa n'ihu n'ọgụ a na-alụso ọrịa coronavirus n'akụkụ niile nke ọma. [More ...]